News Collection: माओवादीको द्रव्य राजनीति
माओवादीको द्रव्य राजनीति
माओवादी पार्टी पङ्क्तिमा मौलाएको द्रव्यमोह हेर्दा लाग्छ, यो पार्टी जुनसुकै बेला तासको महल झै धरासायी हुन सक्छ।
स्वेच्छिक अवकाश लिई शक्तिखोर शिविर, चितवनबाट घर फर्कने क्रममा काभ्रेकी सविना दोङ। उनी ११ वर्षकी छँदै माओवादी आन्दोलनमा लागेकी हुन्।
• २५ माघको साँझ् चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको तेस्रो डिभिजन मुख्यालय शिविरमा लडाकूहरू एकापसमा कुटाकुटमै उत्रिए। कारण थियो, स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्कन लागेका लडाकूहरूलाई दिइएको चेक कमान्डरहरूबाट खोसिनु।
त्यसपछि शिविरमा भएको हिसाबकिताब माग्न थाल्दा अवकाश रोजेका केही लडाकूलाई बन्धक बनाइयो। रातारात भागेर ज्यान जोगाएका कतिपयले युद्धकालमा दुस्मनले गरेको भन्दा तुच्छ व्यवहार आफ्नै कमान्डरबाट खेप्नुपरेको विलौना पत्रकारहरूलाई सुनाए।
एमाओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सरकार गठन सबै विषयलाई द्रव्य आर्जनको माध्यम बनाएको यथार्थ डोकोले छोपेर लुकाएको जस्तो भएको छ। अर्थात्, १० वर्षमा करिब १४ हजार नेपालीको ज्यान लिने गरी उसले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक विद्रोहको मूलभूत उद्देश्य आज केही नेताको राष्ट्रिय पहिचान र तिनको आर्थिक समृद्धिमा सीमित बन्न पुगेको प्रस्टिएको छ। लुकाइएका वास्तविकताहरू जनयुद्धको पर्दा च्यातिँदै जाँदा बाहिरिँदै गएका छन्।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आउने सहमति गरेसँगै काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरूसँग वास्तविक लडाकू सङ्ख्या ७ हजार मात्र रहेको र तीमध्ये आधालाई बाहिरै राखिने बताएका थिए। जसमा अरू दलहरूले खासै विरोध नजनाउँदा “दरबारसँग पूर्ण विश्वस्त हुन नसकिने हुनाले नेपाली सेनाको काउण्टरका निम्ति” शिविरमा बस्ने लडाकू सङ्ख्या बढाउने र प्रतिगामी समूहको बबण्डर रोक्न लडाकूहरूको अर्को समूहलाई योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) को रूपमा सक्रिय पार्ने सफलता पनि पाएको थियो, माओवादी नेतृत्वले। परिणाम, १९ हजार लडाकू राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा परे। वाईसिएलले संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो दल बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्यो।
अनमिनले प्रमाणित गरेका धेरै लडाकू बितेका पाँच वर्षमा शिविर बाहिरै आ-आफ्ना काममा व्यस्त थिए। तिनको तलबभत्ता र रासनको रूपमा जाने मासिक करिब रु.५ करोड माओवादीले एकमुष्ठ असुली गरिरह्यो (हे. हिमाल अङ्क १-१५ साउन २०६७)। शिविरका कमान्डरमार्फत उठ्ने यो रकम उनीहरूकै खातामार्फत पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइन्थ्यो। यसमा प्रत्येक डिभिजनका कमान्डर र ऊसँग निकट सहायक कमान्डरको मात्रै पहुँच हुन्थ्यो। सबै डिभिजन कमान्डर पार्टी अध्यक्ष दाहाल पक्षीय हुन् उनीहरू दाहालसँग सोझो कनेक्सनमा हुन्छन्।
शिविरमा नक्कली लडाकू भर्नेदेखि सक्कली लडाकूलाई वाईसिएल बनाउनेसम्मका कृत्यलाई शक्ति र पैसाकै बलमा दबाएका दाहालले अन्ततः राज्यले लडाकूलाई दिएको रकममा हक जमाउन खोज्दा नराम्रो धक्का व्यहोर्नु पर्‍यो। अर्थात् खुला राजनीतिमा दाहालको भूमिगतकालीन रणनीति काम लागेन। पूर्व माओवादी नेता मणि थापा भन्छन्, “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा रुपान्तरित भइसक्दा पनि विद्रोहबाटै सत्ता कब्जा गर्छौं भन्दासम्म कार्यकर्ता भ्रममा परेकै थिए, तर अध्यक्षले आलिसान बङ्गला छान्दै हिँडेपछि कार्यकर्ताले आफूहरूलाई भ्रमले छोपिएको बुझे।”
माओवादी तासको घर हो
नेताहरू मालामाल भएको सबैले देखेका छन्। त्यसैले लडाकूहरूले आफूले पाउने हिस्सा नेतालाई दिन चाहेनन्। नेताहरूमा त्याग देखेको भए कसैले पनि जिन्दगी खेर गयो, यो उमेरमा बेरोजगार भयौँ भनेर सोच्ने थिएनन्। अब पाएको यही पैसाले घरपरिवार हेर्छौं भन्ने सोच बनाएका उनीहरू त्यसलाई खोस्न खोजिएपछि नेता भनेकै लुटेरा हुँदा रहेछन् भनेर आक्रोशमा आउनु स्वाभाविकै हो। माओवादीले वाईसिएल र बहिर्गमनमा परेका लडाकूलाई आफैँ रकम दिने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ। पार्टी यति धनी रहेछ। यस्तो अवस्थाबीच आज सरकारी राहत लिएर घर फर्केकाहरूको मनमा माओवादीबारे कस्तो धारणा बन्ला?
माओवादी जनयुद्ध हिजो पनि सिद्धान्तमा आधारित थिएन। जनयुद्धकालमा माओवादी र एमालेका १०-१० जना कार्यकर्तालाई राखेर उनीहरूको जीवनपद्धति दाँजेको भए यो छर्लङ्ग हुन्थ्यो। उनीहरूले मान्छे अपहरण गरेर फिरौती उठाए, फिरौती नबुझाउनेलाई सफाया गरे। उनीहरू त्यसबेलादेखि नै सुविधाभोगी थिए। खुला राजनीतिमा आएपछि त झ्न् केही बाँकी राखेनन्। आज त्यत्रो रकम कार्यकर्तालाई दिन्छौँ भन्ने आँट त्यसै आएको होइन। द्रव्यका लागि हिजोदेखि नै ठूल्ठूला अपराध गरेकाले यिनको मनमा अलिअलि त्रास पनि पसेको छ, सुरक्षित हुन चाहन्छन्। तर, यो सिलसिला धेरै दिन चल्दैन। धन र स्वार्थको आडमा बनेको महल तासको महल जस्तै हो।